အမျိုးသားများတွင်နောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (၁၉၈၀) - Your Brain On Porn
comments: စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု / အမျက်ဒေါသ သာ. ကြီးမြတ်လိင်စိတ်နိုးထဖို့ရုပ်ရှင်ခဲထုတ်လုပ်ပြီးနောက်တစ်ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်အကဲခတ်။ ကျနော်တို့ကဒီစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဖြင့်အစပျိုးမွငျ့မား dopamine မှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်သံသယရှိကြသည်။
ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, Vol 89 (4), သြဂုတ် 1980, 595-598 ။
Wolchik, Sharlene တစ်ဦးအားဖြင့် .; Beggs, Vicky, E .; Wincze ဂျွန် P ကို ​​.; Sakheim, ဒါဝိဒ်သည်ငွေကျပ် .; Barlow, ဒါဝိဒ် H ကို .; Mavissakalian, Matig
နောက်ဆက်တွဲလိင်စိတ်နိုးထအပေါ်စိတ်ခံစားမှု arousal ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု 14 18-34 နှစ်အသက်ကြီးအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ss ကနဦး (စိတ်ခံစားမှုဗီဒီယိုတိပ်ခွေနှိုးဆွသော 1 ၏2ဖြစ်စေကြည့်ရှုအားပေးစိတ်ကျရောဂါ-and အမျက်ဒေါသသို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်-and အမျက်ဒေါသကိုထုတ်လုပ်) သို့မဟုတ်တစ်ဦး ကြားနေဗီဒီယိုတိတ်ခွေ (ကခရီးသွား), အီးတစ်ဦးခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုတိတ်ခွေများကနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည် ACH ရာ.
လိင်စိတ်နိုးထတစ်ဦး penile strain gauge နှင့်အတူဇီဝကမ္မတိုင်းတာခဲ့သည်။ အဆိုပါ antecedent စိတ်ခံစားမှုနှိုးဆွသောသို့မဟုတ်ကြားနေဗီဒီယိုတိပ်ခွေစဉ်အတွင်းလိင်စိတ်နိုးထမှုအဆင့်အတန်းမရှိကွဲပြားမှုရှိကြ၏သော်လည်းနောက်ဆက်တွဲခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုတိပ်ခွေစဉ်အတွင်းလိင်စိတ်နိုးထ differential သူတို့ကိုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှု-and အမျက်ဒေါသဗီဒီယိုတိတ်ခွေအောက်ပါလိင်စိတ်နိုးထဟာစိတ်ကျရောဂါ-and အမျက်ဒေါသဗီဒီယိုတိတ်ခွေဒါမှမဟုတ်ခရီးသွားဖြစ်စေအောက်ပါကြောင်းထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါခရီးသွားမတိုင်မီကထိတွေ့စိတ်ကျရောဂါနှင့်အမျက်ဒေါသထုတ်လုပ်သည့်ဗီဒီယိုတိတ်ခွေကိုပြု၏ထက် သာ. ကြီးမြတ်လိင်စိတ်နိုးထမှု။ (10 ref) (PsycINFO
ဒေတာဘေ့စစံချိန်တင် (ဂ) 2012 ယား, ရှိသမျှ rights reserved)